Enye yezona ziMnandi zeMausoleums kwihlabathi
I-Taj Mahal yinto enhle, emhlophe yemarboleum emhlophe eyakhiwe nguMphulor Shah Jahan ngomfazi wakhe othandekayo, uMamtaz Mahal. Kutholakala kwi-bhanki elisenxwemeni loMlambo iYamuna kufuphi neAra, i-India, iTaj Mahal ithatha iminyaka engama-22 ukwakha, ekugqityiwe kugqitywa ngo-1653. I-Taj Mahal, ejongwa njengenye yeMimangaliso Emitsha yehlabathi , inqamle zonke iindwendwe kungekhona kuphela ububanzi kunye nobuhle bobuncwane, kodwa kunye ne-calligraphy yayo enzulu, iintyatyambo ezenziwe ngeempawu zamatye, kunye nomyezo omangalisayo.
Kwakukho ngo-1607, ukuba u- Shah Jahan , umzukulu ka- Akbar Omkhulu , waqala ukudibana nomthandi wakhe. Ngelo xesha, wayengengowesihlanu umbusi wobukhosi bukaMughal .
Uneminyaka elishumi elinesibhozo ubudala, uPrince Khurram, njengoko wayebizwa ngokuba yiloo ndawo, wahlambalaza nge-royal bazaar, ethandana namantombazana avela kwiintsapho eziphakamileyo ezibekwe abasebenzi.
Kwelinye lamadokodo, uPrince Khurram wadibana no-Arjumand waseBanu Baygam oneminyaka eli-15 ubudala, onguyise owayesakuba ngu-nkulumbuso kunye nonina wayetshatile uyise ka-Prince Khurram. Nangona kwakunothando ekuqaleni, abo babini babengavunyelwe ukutshata ngokukhawuleza. Okokuqala, uNkosana Khurram wayenokutshata noKandahari Begum. (Emva koko uza kutshata nomfazi wesithathu.)
Ngo-Matshi 27, ngo-1612, uPrince Khurram kunye nentanda yakhe ethandekayo, owamthiya igama elithi Mumtaz Mahal ("okhethiweyo kwibhotwe"), batshata. U-Mumtaz u-Mahal wayengenakulungile kuphela, wayenobulumko kwaye unentliziyo-ntliziyo. Uluntu lwaye lwavuswa kunye naye, ngenxa yokuba uMamtaz Mahal wayekhathalele abantu, ngokunyanzela ukwenza uluhlu lwabafelokazi kunye neenkedama ukuqinisekisa ukuba bafumana ukutya kunye nemali.
Esi sibini sasinezingane ezili-14 kunye, kodwa ziphela ezisixhenxe kuphela zahlala ziintsana. Kwakungokuzalwa komntwana o-14 owayeza kubulala uMamtaz Mahal.
Ukufa kweMamtaz Mahal
Ngo-1631, iminyaka emithathu ekubuseni kuka-Shah Jahan, kukho ukuvukela, ekhokelwa nguKhan Jahan Lodi. U-Shah Jahan wayethathe umkhosi wakhe e-Deccan, malunga neekhilomitha ezingama-400 ukusuka kwi-Agra, ukuze ahlasele umculi.
Njengesiqhelo, uMumtaz Mahal, owayehlala ecaleni lika-Shah Jahan, ehamba naye, nangona ekhulelwe kakhulu. Ngomhla ka-Juni 16, 1631, uMamtaz Mahal, ententeni ehlotshisiwe, wazala intombazana enempilo phakathi kwenkampu. Ekuqaleni, konke kwakubonakala kulungile, kodwa ngokukhawuleza kwafumanisa ukuba uMamtaz Mahal wayefa.
Ngokukhawuleza xa u-Shah Jahan ethola iindaba zeemeko zomfazi wakhe, wagijima waya kwicala lakhe. Ngethuba lokusa kwenyanga kaJuni 17, 1631, uMamtaz Mahal wafa ezandleni zakhe.
Iingxelo zithi kwintlungu ye-Shah Jahan, waya kwintente yakhe waza wakhala imihla e sibhozo. Xa ekhulayo, abanye bathi wayesekhulile, ngoku sele edlala imisonto emhlophe kunye neemiglasi ezifunayo.
U-Mumtaz Mahal wangcwatyelwa kwangoku, ngokwemiqathango yamaSilamsi, kufuphi neenkampu eBurbanpur. Umzimba wakhe, nangona kunjalo, kwakungafanele uhlale khona ixesha elide.
Izicwangciso zeTaj Mahal
NgoDisemba ngo-1631, xa ukukhwabanisa kunye noKhan Jahan Lodi kwawulwa, u-Shah Jahan wayenamahlathi aseMamtaz Mahal etyhutyhile waza waletha iikhilomitha ezingama-700 ukuya kwi-Agra. Ukubuya kukaMamtaz Mahal kwakuyindwendwe enkulu, kunye namawaka amajoni ahamba kunye nomzimba kunye nabalila behamba ngendlela.
Xa i-remains ka-Mumtaz Mahal ifinyelela ku-Agra ngoJanuwari 8, 1632, yayingcwaba ngethuba lomhlaba linikelwa ngumntu ohloniphekileyo uRaja Jai ​​Singh, kufuphi neTaj Mahal.
U-Shah Jahan, egcwele intlungu, wayenqume ukuthululela loo mvakalelo kwi-mausoleum elula kakhulu, ebiza kakhulu, eyayiza kubachasa bonke abo babeza phambi kwayo. (Kwakhona kwakufuneka ibe yinto eyingqayizivele, ibe yi-mausoleum enkulu yokuqala ezinikezelwe kumfazi.)
Nangona kungekho mntu, owakhiwayo omkhulu weTaj Mahal uyaziwa, ukholelwa ukuba u-Shah Jahan, owayesebenomdla ngokuzakhela izakhiwo, wasebenza kwiiplani ngokwakhe ngegalelo kunye nokuncedwa kweqela labakhi bezona zizakhelekileyo kwixesha lakhe.
Isicwangciso sokuthi iTaj Mahal ("isithsaba sommandla") yayiza kubonisa izulu (Jannah) emhlabeni. Akukho lindleko elalondoloziweyo ukwenzela ukuba kwenzeke oku.
Ukwakha iTaj Mahal
Ngelo xesha, uMbuso weMughal wawungowona owona mhlaba ocebileyo, ngoko u-Shah Jahan wayeneendlela zokuhlawula eli likhulu. Ngezicwangciso ezenziwe, u-Shah Jahan wayefuna ukuba iTaj Mahal ibe yinkulu, kodwa kwakhona, yakhiwe ngokukhawuleza.
Ukukhawulezisa imveliso, abasebenzi abaqikelelwa kuma-20,000 baziswa kwaye bahlala kufuphi kufuphi kwidolophu esandula kwakhiwa kuyo ngokuthi iMamzazabad. Laba basebenzi babandakanye zombini abanezakhono nabanezakhono.
Ekuqaleni, abakhi basebenze kwisiseko kwaye ke kwi-giant, 624-foot-long-plinth (isiseko). Kule nqanaba kwakufuneka uhlale kwisakhiwo saseTaj Mahal kunye nezakhiwo ezimbini ezihambelanayo, izakhiwo ze-sandstone (umsikiti kunye neendwendwe zendlu yeendwendwe) eziseTaj Mahal.
Isakhiwo seTaj Mahal, ehleli ekhondweni yesibini, kwakufuneka ibe yakhiwo esine-octagonal, okokuqala eyakhiwa ngezitena kwaye yabe igqitywe ngeemabula ezimhlophe. Njengamaprojekti amakhulu amakhulu, abakhi benza i-scaffolding yokwakha phezulu; Nangona kunjalo, kwakungeyinto engavamile ukuba i-scaffolding yale projekthi yakhiwe ngezitena. Akukho mntu ufumanise ukuba kutheni.
Iimarbo ezimhlophe zaziqine kakhulu kwaye zatywinwa eMakrana, kwiimitha ezili-200 ukusuka. Ingxelo, ithatha izindlovu eziyi-1 kunye nenani elingenakubalwa leenkomo ukudonsa i-marble kwisayithi yokwakha yaseTaj Mahal.
Iimpawu zeemabula eziqingqiweyo zokufikelela kwiindawo eziphakamileyo zeTaj Mahal, iqhosha elikhulu, elide elinama-elitha elide, lwakhiwe ngodongwe.
I-top yeTaj Mahal ifakwe kwi-dome enkulu, ephindwe kabini i-shell efikelela kwii-240 kunye ne-marble emhlophe.
Iinere ezine ezimhlophe, ezimhlophe zemibala emide zimi kakhulu emacaleni omgangatho wesibini, ezungeze i-mausoleum.
I-Calligraphy kunye neentyatyambo eziNgcotyiweyo
Ininzi imifanekiso yeTaj Mahal ibonisa kuphela isakhiwo esikhulu, esimhlophe, esithandekayo. Ziziphi izinto eziphosakeleyo zizitho zintlanzi ezingabonwa kuphela.
Yiyo le nkcukacha eyenza iTaj Mahal ibe yindoda enomfazi kwaye ikhupha.
Kwi-mosque, indlu yeendwendwe, kunye nesango elikhulu elisezantsi ekupheleni kwentsimbi yeTaj Mahal kubonakala iindinyana ezisuka kwiQuran (ngokuphindaphindiweyo i-Koran), incwadi engcwele ye- Islam , ebhaliweyo kwikhalligraphy. U-Shah Jahan uqeshe u-Amanat Khan, i-master calligrapher, ukuba asebenze kwiindinyana ezibhaliweyo.
Ngokwenene, iindinyana ezigqityiweyo ezivela kwiQuran, zambethe ngeemabula ezimnyama, zikhangeleka zilula kwaye zinyamekile. Nangona eyenziwe ngamatye, iifowuni yenza ukuba kubonakale kubhalwe ngesandla. Iingxelo ezingama-22 ezivela kwiQuran zachazwa ngo-Amanat Khan ngokwakhe. Okuthakazelisayo kukuba, u-Amanat Khan nguye kuphela lowo u-Shah Jahan avumele ukuba asayine umsebenzi wakhe eTaj Mahal.
Okumangalisa kakhulu kunokuba i-calligraphy yizona zimbali ezintle ezifakwe kwiimpawu ezifumaneka kwiTaj Mahal. Kwinkqubo eyaziwa ngokuba yi- parchin kari , abaqingqi bamatye abanobuchule banqumle ukuyila kweentyatyambo ezimhlophe kwiimarbo ezimhlophe baze batyeke amatye anqwenelekayo kunye namanqabileyo anqwenelekayo ukuze benze imivini kunye neentyantyambo.
Iintlobo ezingama-43 ezahlukahlukeneyo zamatye anqabileyo nezisisigxina ezisetyenziselwa ezi ntyatyambo zivela emhlabeni wonke, kuquka i-lapis lazuli esuka eSri Lanka, iJade esuka eChina, i-malachite esuka eRashiya, kunye ne-turquoise evela eTibet .
Njengasezinkolweni ezininzi, i-Islam inomfanekiso weParadeyisi njengomyezo; Ngoko, umyezo waseTaj Mahal wawuyingxenye ebalulekileyo yesicwangciso sokwenza izulu emhlabeni.
Umyezo waseTaj Mahal, osemzantsi we-mausoleum, unamaqhosha amane, ahlukaniswe "imilambo" emine yamanzi (omnye umfanekiso obalulekileyo wamaSilamsi weParadesi), ehlanganisene nedama eliphakathi.
Izitiya kunye 'nemilambo' zanikezwa ngamanzi ukusuka kuMlambo waseYamuna ngumbutho omanzi, ophantsi komhlaba wamanzi.
Ngelishwa, akukho iirekhodi eziye zaqhubeka zisitshela ukuba zeziphi izityalo ezazisitshala ekuqaleni kwintsimi yaseTaj Mahal.
Ukuphela kwe-Shah Jahan
U-Shah Jahan wahlala elilileyo iminyaka emibili kodwa emva koko, ukufa kukaMamtaz Mahal kusamthintela kakhulu. Mhlawumbi kutheni okwesithathu kaMonta Mahal no-Shah Jahan, oonyana abane, i- Aurangzeb , bekwazi ukubulala abazalwana bakhe abathathu ngokugqithiseleyo baze bavalele uyise.
Ngo-1658, emva kweminyaka engama-30 njengo-emperor, uShahan Jahan wasetyenziselwa kwaye wafakwa kwi-Red Fort e-Alfa. Akakwazi ukuhamba kodwa ngezona zinto ezintle eziqhelekileyo, uShahan Jahan wachitha iminyaka eyisibhozo ehamba phambili ekhangela iifestile, ebheka uTaj Mahal wakhe othandekayo.
Xa u-Shah Jahan wafa ngoJanuwari 22, 1666, i-Aurangzeb wayelungcwaba uyise kunye noMamtaz Mahal kwi-crypt phantsi kweTaj Mahal. Kumgangatho ophezulu weTaj Mahal, ngaphezu kwe-crypt, ngoku uhleli kwiienotaphs ezimbini (ezingenanto, amangcwaba omntu). Omnye ophakathi kwegumbi kungoMamtaz Mahal kunye nomnye ongasentshonalanga ngu-Shah Jahan.
Ukujikeleza iipenotaphs yikrini ebonakalayo echongiweyo, i-lacy, yemabula. (Ekuqaleni bekuyikrini yegolide kodwa i-Shah Jahan yayifake endaweni leyo ukuze amasela angayi kuhendwa.)
I-Taj Mahal kwiintshonkotha
U-Shah Jahan wayenobutyebi obaneleyo kwi-coffers yakhe ukuxhasa i-Taj Mahal kunye neendleko zayo zokulondoloza amandla, kodwa ngaphezu kweenkulungwane, ubukhosi bukaMughal balahlekelwa ubutyebi bayo kunye noTaj Mahal bawa phantsi.
Ngama-1800, amaBrithani axoshe ama-Mughal aze athathe iNdiya. Kwabaninzi, iTaj Mahal yayinhle kwaye ngoko banqumla amatye emagqabini, bebiba izibane kunye neengcango zesiliva, baze bazama ukuthengisa i-marble emhlophe ngaphesheya.
KwakuyiNkosi Curzon, waseBrithani owayengumninimzi waseIndiya, owamisa konke oko. Esikhundleni sokuphanga iTaj Mahal, uCharzon wasebenza ukuyibuyisela.
I-Taj Mahal Ngoku
I-Taj Mahal iphinda ibe yindawo enhle kakhulu, kunye nabantu abayizigidi ezi-2.5 abayivakashelayo ngonyaka. Abaveleli banokutyelela emini, apho umbala weemarbo ezimhlophe uguquka ngokuxhomekeke kwithuba lemihla. Kanye ngenyanga, iindwendwe zinethuba lokwenza uhambo olutshanje ngexesha lwenyanga epheleleyo, ukubona indlela iTaj Mahal ibonakala ngayo ikhanya ngaphakathi ngaphakathi kwenyanga.
Ngowe-1983, iTaj Mahal yafakwa kwiLifa leMveli kwiHlabathi ye-UNESCO, kodwa ngoku ixhatshazwa kwiimveliso ezikufuphi kunye nokususwa kwamanzi.
DuTemple, Lesley A. iTaj Mahal . I-Minneapolis: uLerner Publications Company, 2003.
Harpur, uJames noJennifer Westwood. I-Atlas yeendawo zeNkundla. INew York: Weidenfeld & Nicolson, ngo-1989.
Ingpen, uRobert noFilip Wilkinson. I-Encyclopedia yeziNdawo ezimangalisayo: Ubomi kunye nemigca yeendawo ezidlulileyo kwihlabathi . ENew York: Iincwadi zeBarnes neeNewable, ngo-1999.
Ukunyuka kwama-Islamic Geography kuma-Middle Ages
Ubomi beCarl O. Sauer
Umxholo woMthetho weNtlalontle
Funda uMthetho weBetirix weBilo ezimbini kwi-"Promised"
Uhambo lweeNgqungquthela: Iinkonzo kunye neNgcono
Oodadewabo abaSebenzi abasixhenxe balawula i-Sky
Iprogram yeFrench yokuhlala ixesha elide lokufaka isicelo seVisa
Iindawo zokugwema ukuhamba nge-Barefoot Ngenye imini ngaphandle koSuku lweeBhotile
100 Amagama amaqela angabonakaliyo
Iinqwelo eziphezulu ze-Snowless ze-5 ezingenamfundi
Ingqungquthela yeNgoma-Njenge-Villanelle Ifom yeenkondlo
Ukuhlaziywa kwePiano yeDiano | Yamaha 'Piaggero' NP-31
Yiyiphi i-Angle Angle, efakwe i-Angle ne-Steering Axis Inclination?
Ukuphazamiseka - Kuye Umoya Wakho!
Umqali waseJamani uMistake der Freund
Ziziphi iiNkqubo zeNkqubo zokuPhakanyiswa kweZikolo eziPhakathi noPhakamileyo?
Ziziphi Izinto Ezilungileyo Zibhakabhaka?
Iiprojekti eziKhulayo zeCallstal
Uluhlu lweNcwadi kaMary Mary Higgins
I-Anatomy yeBongo: Umsebenzi weCerebral Cortex
Ukuguqulela iNguqulelo zeNguqulelo kwiSpeyin
Ukukhangela iileyiktopi phakathi kwama-$ 500.00- $ 1,000.00?
I-Glossary yeSpain-IsiNgesi yeComputer ne-Intanethi Imigomo
I-Tokugawa Shogunate: Ukuvukela kweShimabara
I-haber cuando la visa americana is revezada por fraude